Ogaden News Agency (ONA) – Dagaaladii ugu dambeeyay ee lagu qaaday cadawga
Dagaaladii ugu dambeeyay ee lagu qaaday cadawga
Posted by ONA Admin	/ August 15, 2012
Wararka nagasoo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO warbixinadii ugu dambeeyay oo sheegaya dagaalo dhawr ah oo lagu qaaday askarta daalan ee gumaysiga Ethiopia ku waasi oo ka dhacay deegaano kamid ah wadanka Ogaadeeniya.
Dagaaladaasi ayaa waxay kala dhaceen taariikhaha kala ah;
– 2/08/2012 Halka lagu magaacaabo Kortag-dheere oo Dagmada Gunado ee Gobolka Jarar dagaal halkaasi ku dhex maray Askata Mooraalka Jabasan ee gumaysiga Ethiopia ayaa waxaa lagaga dilay 3 Askari.
– 04/08/2012 Deegaanka Gobleey oo oo isna katirsan Dagamada Gunado ee Gobolka Jarareed weerar lagu qaaday Askar gumaysi oo deegaankaasi joogtay ayaa waxaa lagaga dily 4 Askari.
– Deegaanka Dhabiile oo Dagamada Dhagaxbuur kartis taariikhdu markay ahayd 13/08/2012 fal gaadmo ah oo lagu fuliyey askar gumaysi oo deegaankaasi ku sugnayd ayaa waxaa lagaga dilay 2 Akari.
– 08/08/2012 Goladheerti oo Dagmada Dhagaxbuur karitsan Dagaal halkaasi ka dhacay waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale
– 12/08/12 Deegaanka lagu magacaabo Goora-hudha oo katirsan Deegaanka Miidhaa ee Gobolka Fiiq weerar ay halkaasi ku qaadeen cutub katirsan NH/CWXO ayaa waxaa askarta daalan ee gumaysiga madow ee Ethiopia lagaga dilay 7 Askari halka dhaacawucuna uu kor udhaafayo 4 kale.
– 10/08/20120 Degaanka lagu magacaabo Taakule oo karitsan Deegaanka Raqey ee Gobolka Fiiq weerar isna si heer sare ah loo qorsheeyey oo lagu qaaday askar gumaysi oo deegaakaasi ku sugnayd ayaa waxaa lagaga dilay 10 Askari.
Waxaa iyaguna jira dagaalo kale oo ka kala dhacay deegaanada kala ah Golduulaan oo katirdan Galadiid, Xanarsaney iyo Odo oo katirsan Dagmada Jigajiga ku waasi oo khasaare lixaadle lagu gaadhsiiyey askarta Gumaysiga Ethiopia oo faafaahintooda aan gadaal ka soo tabin doono.